Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Taom-baovao amin'ny lamasinina any Shina: 11.5 tapitrisa no nanana an'io hevitra io
Ny ankamaroan'ny toerana fitsangantsanganana an-tampony any Shina, ao Beijing, Xi'an, Chengdu, Guilin, Shanghai ary maro hafa, dia azon'ny lamasinina haingam-pandeha.
Ny fitsangatsanganana lamasinina any Shina no eritreritry ny maro tamin'ny faran'ny fialantsasatry ny Taom-baovao telo andro. Fitsangatsanganana 11.5 tapitrisa eo ho eo no antenaina hatao amin'ny talata rehefa hiverina hiasa sy hianatra ireo mpandeha satria efa hifarana ny fankalazana. Mba hiatrehana ny fitomboan'ny fangatahana dia nanampy fiarandalamby vonjimaika 318 i China Railway Corp.
Sahabo ho 20.6 tapitrisa ny dia an-dalamby natao nandritra ny Alahady sy Alatsinainy, ny roa andro voalohany amin'ny fialantsasatra, fitomboana 549,000 isan-taona.
Ny fiaran-dalamby bala no nanjary safidy ambony fitaterana ho an'ny ankamaroan'ny sinoa mandritra ny fialantsasatra satria mihatsara ny serivisy ary mihitatra ny tambajotran-dalamby, araka ny tatitra avy amin'ny serivisy fitsangatsanganana Tuniu.com.
Làlam-by vaovao toy izany folo miaraka amin'ny halavany 2,500 kilometatra no napetraka tamin'ny taona 2018. Ny halavan'ny lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha any Shina dia nitombo hatrany amin'ny 29,000 km, mihoatra ny roa ampahatelon'ny fitambaran'izao tontolo izao.
Miaraka amin'ny fanombohana ny làlamby haingam-pandeha mampifandray ny renivohitry ny faritanin'i Zhejiang any Hangzhou sy ny tanànan'ny Huangshan any amin'ny faritanin'i Anhui-miaraka amin'ireo toerana mahafinaritra toa an'i Huangshan Mountain, West Lake ary ny farihy Qiandao manamorona ny zaridaina mpizaha tany no nirohotra hitsidika ireo toerana manintona. hankalazana ny Taom-baovao.
Ireo toerana fizahan-tany manamorona ny lalamby dia nahitana fiakarana isan-taona ny isan'ireo mpitsidika 80 isan-jato nandritra ny fialantsasatra, araka ny filazan'ny orinasa Travel Travel Ctrip.
Ny ankamaroan'ny mpandeha fialantsasatra dia teraka tamin'ny taona 1980 sy 1990, miaraka amin'ireo izay eo anelanelan'ny 19 sy 35 dia mitaky 65 isan-jaton'ny mpitsangatsangana rehetra. Ny mpandeha an-tongotra tanora kokoa dia manana aleony mandeha mitsangatsangana miaraka amin'ny namany na mpiara-miasa aminy fa tsy mody hihaona amin'ny fianakaviana mandritra ny fialantsasatra, hoy ny fanadihadiana nataon'i Tuniu.